छाला चाहुरि पर्यो, तन्नेरी देखिने घरेलु उपाए यस्तो छ जानी राखौं > जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ) - Taja Report
Homeरोचकछाला चाहुरि पर्यो, तन्नेरी देखिने घरेलु उपाए यस्तो छ जानी राखौं > जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ)
September 1, 2018 रोचक Comments Off on छाला चाहुरि पर्यो, तन्नेरी देखिने घरेलु उपाए यस्तो छ जानी राखौं > जानकारी अहिले शेयर गर्नुहोला र फुर्सदमा पढ्नुहोला, (ज्ञान बढ्छ)
वृद्ध हुदैं गएपछि प्राकृतिक तत्वले छालाको तन्किने र लचिलोपनलाई घटाउँदछ । आज हामी तपाइँलाई यस्को घरेलु उपचारबारे जानकारी दिन्छौं । जस्ले तपाइँको छालालाई चाउरी पर्न र खुकुलो हुनबाट बचाउँछ । साथै यसले छालालाई तन्काई लामो समयसम्म जवान देख्न मद्धत गर्दछ ।
काँक्रो र अण्डाको सेतो भागको महत्व :
काँक्रो :काँक्रोले छालालाई प्राकृतिक तरिकाले पुनः बनाउन मद्धत गर्दछ । यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण हुन्छ । यसमा पाईने भिटामिन ‘ सी ’ र ‘ के ’ले छालालाई चाउरी बनाउने र खुकुलो पार्ने कारक तत्वको रुपमा रहेको मुक्त कण ( फ्री रेडिकल ) हरुलाई नष्ट गर्दछ । त्यसैगरी काँक्रोमा पाईने सिलिकाले छालाको चाउरीपनबाट बचाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दछ ।
अण्डाको सेतो भाग :अण्डामा छालालाई तन्काउने गुण हुन्छ । त्यसैले अण्डा पनि छालाको लागि धेरै फाईदाजनक छ ।
बनाउने विधि :काँक्रोलाई २ आधा भागमा काट्नुहोस् । त्यसपछि काँक्रोको एक आधा भागलाई खुर्काउनुहोस् । त्यसपछि यस काँक्रोलाई १ ईन्चभन्दा सानो हुनेगरी स–सानो टुक्रामा काट्नुहोस् । र यस टुक्रालाई ब्लेन्डरमा मध्यम गतिमा हालेर २ मिनेटसम्म फिट्नुहोस् । त्यसपछि यसलाई छानेर कचौरामा हाल्नुहोस् । र यसमा १ वटा अण्डाको सेतो भागलाई मिसाउनुहोस् ।
यस मिश्रणलाई शरीरको छालालाई तन्काउन आवश्यक ठाउँमा लगाउनुहोस् । र १५ मिनेटसम्म त्यसै छोडी चिसो पानीले पखाल्नुहोस् । छिटो परिणामको लागि हप्ताको १ वा २ पटक यसको प्रयोग गर्नुहोस् ।
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (207)
३ करोड नेपालीलाई खुशिको खबर : नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा, भारत सूचीमै परेन (फोटो फिचर) (131)
दाँतको किरा मार्न र दुखाई कम गर्न अपनाउनुस् यी ४ घरेलु उपाय!!जानी राखौ (107)
पत्ता लाग्यो एड्सको औषधी, गाई भित्र यस्तो शक्ती ….. (85)
घर छोडेको दिन र बा को फाटेको चप्पल !! अवश्य पढ्नुस !! नपढे पछुतो हुनेछ !! मात्र २ मिनेट समय दिनुस (56)
न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ सुगर (मधुमेह)!, तर कसरी ? थाहापाऊनुहोस् (50)